Kabtanka Barcelona ee Lionel Messi oo markiisii 7-aad ku guuleystay abaal-marinta Pichichi Trophy – Gool FM
Kabtanka Barcelona ee Lionel Messi oo markiisii 7-aad ku guuleystay abaal-marinta Pichichi Trophy
Haaruun July 20, 2020
(Barcelona) 20 Luulyo 2020. Kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona ee Lionel Messi ayaa markiisii todobaad xirfaddiisa ku guuleystay abaal-marinta Pichichi Trophy.
Abaal-marintan oo la siiyo ciyaaryahanka ugu goolasha badan horyaalka La Liga xilli ciyaareedka ayaa waxa uu xiddiga reer Argentina ee Leo Messi sanadkan ku garaacay dhaliyaha kooxda Real Mdrid ee Karim Benzema.
Messi waxa uu Barcelona u dhaliyey kal ciyaareedkan 25 gool oo horyaalka La Ligaha Spain ah, waxaana uu afar gool oo nadiif ah kaga qaaday Karim Benzema oo kaalinta labaad galay, kaasoo ku dhammaystay inuu 21 gool ka dhaliyey horyaalka La Liga, waxaana kulankii ugu dambeeyey xiddiga reer France garoonka ka baxay isagoo aan shabaqa soo taaban.
Waa markii afaraad oo xiriir ah oo uu Messi ku guuleysto sanadkan abaal-marinta Pichichi Trophy, isagoo noqday Leo ciyaaryahankii ugu horreeyey ee wakhtigii uu dheeraa abaal-marintan si xiriir ah u qaata tan iyo wixii ka dambeeyey Hugo Sanchez oo sannadihii siddeetameeyadii afar jeer oo isxigta ku guuleystay.
Kal ciyaareedkii la soo dhaafay waxa uu dhaliyey 36 gool, halka heerkiisii gooldhalineed ee ugu wanaagsanayd ay ahayd xilli ciyaareedkii 2011/12 oo uu 50 gool ka dhaliyey horyaalka La Liga.
Inkastoo goolal yar uu dhaliyey xilli ciyaareedkan haddana taasi kama reebin inuu markale abaal-marintan ku guuleysto maadaama uusan jirin ciyaaryahan kal ciyaareedkan Messi kaga goolal badnaa horyaalka.
Kulammada CAAWA laga ciyaarayo horyaallada waa weyn ee Premier League iyo Serie A
Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos oo dhigay rikoor taariikhi ah oo uusan difaac hore u sameyn!!